Diabetes – Page 16 – Healthy Life Journal
အချိုရည်နှင့် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ဆက်စပ်မှု
# တစ်နေ့မှာ အချိုရည် (Soft Drink) တစ်ဘူး သောက်တာကြောင့် အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုသွေးချို ရောဂါ ဖြစ်နှုန်းကို ၂၂ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်စေနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ဖြစ်သူဦးရေ ၁၀ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှိ
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်သူများကို လေ့လာထားသည့် အချက်အလက်များအရ တောရွာနေ ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်သူ ဦးရေမှာ ၉ ရာခိုင်နှုန်း၊ မြို့နေ ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်သူ ဦးရေက ၁၄ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး မြန်မာတစ်နိုင်ငံ လုံးအတိုင်းအတာရ...
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မေး။ ။ ပိန်တဲ့ သူတွေဟာ ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နိုင်ပါသလား ဆရာ။ ဖြေ။ ။ ပိန်တဲ့သူလည်းဆီးချိုရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ ဝတဲ့သူမှ ဆီးချိုဖြစ်တယ်၊ ပိန်တဲ့သူဆိုရင် ဆီးချိုမဖြစ်ဘူး . . ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။...
သွေးတိုးတာနဲ့ဆီးချိုရောဂါ နှစ်ခုစလုံးက ရောဂါငြိမ်အောင်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမကောင်းရင် ကျောက်ကပ်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာထိခိုက်ပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွေးတိုးရောဂါပဲရှိရှိ၊ ဆီးချိုရောဂါပဲရှိရှိ ရောဂါကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်အောင် ဆေးကုသမှုကိုစနစ်တကျ ခံယူသင့်ပါတယ်။
ဆီးချိုသမား လူကောင်းကဲ့သို့ နေနိုင်စေမည့် နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ
မေး ။ ဆီးချိုသမားက ယေဘုယျအားဖြင့် ဘယ်လိုနေထိုင်ရင် လူကောင်းလို နေနိုင်မလဲ။ ဘယ်လို အစာ တွေကို များများ စားသင့်သလဲဆိုတာ လမ်းညွှန်ပေးပါရှင်။ အပယ်ခံ (FB) ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးသည် ။ ဖြေ ။...
သုတေသနရလဒ်များအရ တွေ့ရသည့် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်သော အံ့ဖွယ်အကျင့်များ
၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊ ကိုယ်အလေးချိန်များတာ ဒါမှမဟုတ် ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက်စားတာတွေကြောင့် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တချို့အလေ့အကျင့်တွေကလည်း ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်တာကို အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကော်ဖီဖြတ်ခြင်း ကော်ဖီသောက်တာကြောင့် အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုရောဂါ...
ကြက်သံပရာပေါင်းစားရင် ဆီးချိုရောဂါ ပျောက်နိုင်သလား . . .
မေး. ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ သတင်းတစ်ပုဒ် တွေ့လိုက်ရလို့ပါ။ လူတစ်ယောက်ကတစ်နေ့မှာ နေမကောင်းဖြစ်သတဲ့။ သူဟာအာတွေခြောက်ပြီး အမြဲရေဆာ၊ ထမင်းလည်း အမြဲဆာနေသလို တုန်နေသတဲ့။ချွေးစေးတွေ ပြန်၊ ဆီးကခဏခဏသွားတာနဲ့ ဆရာဝန်ပြပြီး စစ်ဆေးကြည့်တော့ ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နေပါသတဲ့။ ဒီလိုနဲ့ဆေးစားလာတာ ၂ နှစ်လောက် ကြာပါတယ်။ အသက်...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆီးချိုရောဂါအပါအဝင် ကူးစက်မဟုတ်သောရောဂါများ ဖြစ်စေနိုင်သည့် အကြောင်းအချက်များ
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း မေး ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆီးချိုရောဂါ အပါအဝင် ကူးစက်မဟုတ်တဲ့ရောဂါတွေ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအ ချက်တွေကို ဘယ်လို စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့တာပါလဲ ဆရာ။ ဖြေ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ဖြစ်ပွားနှုန်းနဲ့ ကူးစက်မဟုတ်တဲ့ရောဂါတွေ...
ဆီးချိုရောဂါရှိသူအတွက် သင့်တော်သော ဆီ
မေး. ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေက ဘယ်လိုဆီမျိုးကို စားသင့်ပါသလဲ၊ စားအုံးဆီကို စားလို့ရပါသလားဆရာ။ ဦးလမင်း၊ ပုသိမ်။ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ဆီးချိုရောဂါရှိတဲ့သူတွေအတွက် မြေပဲဆီ၊ နှမ်းဆီတွေက သင့်တော်ပါတယ်။ သံလွင်ဆီကို စားနိုင်ရင် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။...
ဘောလုံးကန်ခြင်းက ဆီးချိုရောဂါနှင့် နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေများကို လျော့ကျစေနိုင်
ကိုထက် အသက် ၆၀ ကျော် ၇၀ အရွယ်ဆိုရင် လူတိုင်းက ဘောလုံးကန်ဖို့ တွေးမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လေ့လာမှုတွေအရ အသက် ၆၀ ကျော်ချိန်အထိ ရေရှည်ဘောလုံးကန်ခဲ့ကြသူတွေက အသက် ၆၃ နှစ်ကနေ ၇၅ နှစ်အရွယ်မှာ ဘောလုံးမကန်ခဲ့ဖူးသူတွေထက် ကျန်းမာရေးပိုကောင်းပြီး...